Warsaxaafadeed ay IGAD ka soo saartay Arrinta Gen,Morgan
kulan ay iskugu yimaadeen Guddiga fududeynta shirka ee IGAD ayay ka soo saareen war saxaafadeed ay ku cambaareynaa Gen morgan oo ka maqan shirka dib u heshiisiinta soomaaliyeed ee ka socda dalka kenya mudo dhowr bilood ah.
warsaxaafadeedkan ayaa ka dambeeyay kadib markii la sheegay in ay jiraan warar sheegaya in Gen, uu abuubulayo weerarro dagaal oo ku wajahan magaalada kismaayo iyo agagaarkeeda,waxayna wakiilada IGAD ee shirka ku sheegeen warsaxaafadedkooda in falalkaas uu morgan wado ay lidi ku yihiin dadaalka nabad raadineed ee soomaaliya loogu jiro oo hadda ku dhaw gabagabo in uu wiiqi karo isla markaasna uu abuuri karo jawi naxdin leh.
waxa ay xuseen in ay dhowr jeer u direen casuumad iyo baaqyo si uu shirka ugu soo laabto balse aysan ka helin wax jawaab ah oo ku aadan baaqyadoodaas sida ay ku sheegeen warkooda Guddiga,waxayna uga digeen in uu joojiyo weeraradaas la sheegayo in uu wada Gen moragan hadii uu ku kacana ay maxkamad la hortagi doonaan.
waxaa kale oo ay Guddigu sheegeen in ay ka qaadayaan talaabo caalami ah shaqsi walba oo isku daya in uu gacan taageero siiyo moorgan,iyo waliba dowladii iyagana talaabadaas mid la mid ah u sahla in ay la tiigsan doonaan sharci caalami.
waxay ku soo gabagabeeyeen warsaxafadeedkoodaas in ay midnimada soomaaliyeed iyo nabad ku wada noolaansho ka dhacda soomaaliyeed ay muhiim mida ay raadinayaana ay tahay sidaas darteedna aysan u dulqaadan doonin cidii carqalad ku noqota Nabad ka dhalata soomaaliya.
HAMOOGAAN: DHEGEYSIGA MU'TAMARKA KA SOCDA MINNEAPOLIS: LIVE 2:00pm - 5:00PM WAQTIGA MINNEAPOLIS (CENTRAL TIME) Sept 5, 6, 2004